Smart Electronics MCPCB loogu talagalay iftiinka tuubada LED-ka ee loo yaqaan 'MCPCB' loogu talagalay koronto sare LED
1.Waa noocee PCBS-ga aad ku takhasustay?
Waxaan ku takhasusay soo saarida Singe-dhinac PCB, PCB-dhinac-PCB, Multilayer PCB, Aluminium PCB, Buufiyo PCB-ga, PCB-ga Gold Immersed, iwm
2.Waa maxay waqtigaaga Lead?
Waqtiga Lead-ka ayaa sida caadiga ah waqtiga lagu joogaa halkan, badiyaa 3-5 maalmood muunadda PCB, 7-15 maalmood oo loogu talagalay wax soo saar ballaaran. Xaaladaha qaaska ah qaarkood, waxaan sidoo kale kula talin karnaa macaamilka waqti hore si looga fogaado wax kasta oo filasho ama khasaaro dhanka macaamiisha ah.
3.Waa maxay siyaasada tijaabadaadu iyo sida aad u xakameyso tayada?
Muunad, badanaa lagu tijaabiyo baaritaanka duulaya; ee loo yaqaan 'PCB Volume' ka badan 3 mitir murabac, oo badanaa lagu tijaabiyo qalab, tani way ka dheereyneysaa. Sababtoo ah waxaa jira talaabooyin badan oo wax soo saarka PCB ah, waxaan caadi ahaan sameynaa kormeer tallaabo kasta ka dib.
4.Waa maxay xirmadaadu?
Iyada oo ay ku jiraan xirmada faaruqinta gudaha iyo kartoonka banaanka.
Tani waxay kuxirantahay macaamilka, mararka qaar waxaan kuso dirnaa dhanka gudbiyahayaga, oo sidoo kale ah wakaalada DHL, TNT, UPS, FedEx, iyo wixii la mid ah. Hagahayaga ayaa bixin kara qarashka xamuulka oo aad ugafiican inta aan toos uga helno shirkadaas xawaareysan.
6.Waa maxay wax soo saarkaagu?
Awooddeenu waa celcelis ahaan 30,000 mitir murabac bishii.
7.Waxaan haystaa tijaabada PCB, ma ahan feylka PCB, ma ii soo saari kartaa aniga?
Haa, waan nuqulan karnaa feyl kusalaysan tusaalahaaga, feylashaan magacyadooda Gerber, soosaarka kadibna waxaa lasiin doonaa faylka Gerber.
8.Ma qorsheyn kartaa faylka Gerber?
Waan qaabeyn karnaa faylka Gerber haddii macaamilku na siin karo qorshe, muunad qaabeysan ayaa sidoo kale la bixin karaa haddii macaamilku doonayo.
9.Waa noocee qaabka faylka PCB aad u aqbali karto wax soo saarka? Waa maxay barnaamijka CAM ee aad isticmaasho?
Waxaan aqbalnaa faylka Gerber ee wax soo saarka. CAM350, GENESIS, UCAM, CG-CAM, V-2000.
10.Waxaad ii oggolaanaysaa inaan dhowr qaybood lambar isku dhajiyo hal guddi?
Haa, tani badanaa waxay ka dhacdaa warshaddayada, habkani wuxuu ka caawin karaa macaamiisha inay yareeyaan waxoogaa kharash ah iyo illaa heer gaar ah, waxay kaa caawin kartaa yareynta qaar ka mid ah kharashka shirarka.
11.Waa maxay tirada ugu yar ee dalabkaagu?
Xadid kuma lihin MOQ, nooc, mug dhexdhexaad iyo mug weyn dhammaan waa la aqbali karaa.
12.Will ROHS Nooc Gaar ah oo Bilaash ah oo Macaamiil ah. Guddiyada waxaa lagu calaamadeeyay calaamadda ka madax bannaan hoggaanka?
Haa, waa awoodaa, laakiin waxay u baahan yihiin macmiil inay ku caddeeyaan shuruudaha faylka ku jira.
13.Faylasha naqshadayntu miyay badbaado tahay markaan kuu soo gudbiyo adiga wax soo saar?
Faylka macaamiil kasta sifiican ayaa looga ilaalin doonaa halkan warshadeena mana u ogolaan doonno cid saddexaad inay ogaato. Waxaan kula saxiixan karnaa NDA.
Hore: Aluminium LED Bulb Light PCB, OEM MCPCB Soo-saare
Xiga: PTR / IR Sensor Printed Circuit Board PCB Xakamaynta Nalka LED
Tayada ugu fiican aluminium awood sare leh PCB PCB 220v, ...
Jidka kuleylka tooska ah MCPCB iyo Sink-pad MCPCB, C ...
LED MCPCB Daabacidda Guddiyada Wareegga PCBA Adeeg f ...
Shenzhen aluminium PCB aluminium PCPCB tayo sare leh Ta ...